डल्ले खुर्सानी : ग्यास्ट्रिक तथा अल्सर निको पार्न अचुक औषधि – Dainik Samchar
डल्ले खुर्सानी : ग्यास्ट्रिक तथा अल्सर निको पार्न अचुक औषधि
January 20, 2021 411
त्यसमा नि डल्ले अर्थात अकबरे खुसार्नीलाई विशेष मानिन्छ । डल्ले खुर्सानीको नियमित प्रयोगले ग्यास्ट्रिक तथा अल्सर जस्ता रोगको औषधी समेत हुन्छ ।
डल्ले खुर्सानीमा पाईने क्याप्सिसिनका कारण रोगीलाई फाईदा पुर्‍याउछ । यो खुर्सानीको नियमित सेवनले रोगहरू निको हुन्छ । त्यसबाहेक डल्ले खुर्सानीका निम्न फाइदाहरु रहेका छन् ।
मोटोपन घटाउछ ।
रगतमा चिनीको मात्रा घटाउछ ।
पिसाबको विरामीलाई लाभदायक छ ।
हाडजोर्नी लगाएतका दुखाइ घटाउछ ।
विशेष गरेर अकवरे खुसार्नी हालेर बनाईएको परिकारमा किटाणुको संक्रमण कम हुन्छ ।
थकाइ मेटाउछ ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
राती सुत्नु अघी अनिवार्य गर्नुहोस यस्ता काम,कहिले हुनेछैन धनको कमी,बन्नु हुनेछ मालामाल।
ज्योतिषशास्त्र अनुसार, रातको लागि केहि यस्तो काम बताइएको छ जसलाइ पालना गरे फलिफाप हुन्छ । यी काम र नियमलाई अपनाउनाले घरमा सदैव लक्ष्मीको कृपा बनिरहने विश्वास गरिन्छ । सुत्नुभन्दा पहिला यस्ता काम गर्नुहोस् राती घरको दक्षिण र पश्चिम कुनामा बत्ती वा बल्ब बाल्नाले पितृको आत्माले शान्ति पाउँछ र घरमा सम्पन्नता छाउँछ । पूजा घर वा देव स्थानमा राती दियो बाल्नाले घरमा लक्ष्मीको वास रहन्छ ।
सुत्नुभन्दा पहिला आफ्नो गोडा धुनपर्छ, यसो गर्नाले राम्रो निद्रा आउँछ र निद्रा राम्रो आउनाले स्वास्थ्य समेत ठीक रहन्छ ।सुतेको बेलामा आफ्नो खुट्टालाई उत्तरी दिशातर्फ पार्नुहोस् । यसो गर्नाले शरीर र घरमा समेत नकरात्मक उर्जा आउन पाउँदैन । सयन कोठामा कपूर बाल्नाले सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हुन्छ र पति पत्निबीचको सम्बन्ध समेत सुमधुर बन्छ । घरमा भएका बृद्धा र आमा बुबा सुतिसकेपछि मात्र सुत्नुहोस् । यसो गर्नाले परिवारमा राम्रो वातावरण बन्छ ।
यो पनि समाचार, नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले व्यवस्था परिवर्तनमा जस्तै वर्तमान व्यवस्थालाई स्थापित गर्न र देश विकास गर्न सबै दलबीच एकता आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । रेडियो सन्देशको आयोजनामा आज भएको प्रदेश नं ३ का पत्रकारको भेलामा उहाँले मुलुकको परराष्ट्र नीति, शिक्षा नीति तथा विकासको ठोस योजनामा आम सहमति हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो । “राष्ट्रले विकासमा फड्को मार्न सबै दल तथा नागरिक समुदायबीच आम एकता आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले लोकतन्त्र विरोधी शक्तिले सत्ता हत्याउन खोज्यो भन्ने गरिए पनि प्रतिगमनकारी शक्तिले पुनःराज्य कब्जा गर्ने भन्ने कुरा कल्पना गर्नै नसकिने बताउनुभयो । विस्थापित शक्ति जहिले पनि चलमलाउन खोज्नु सामान्य भएको बताउँदै नेता श्रेष्ठले लोकतान्त्रिक शक्तिले राम्रो काम नगर्ने हो भने मात्र त्यस्ता शक्तिले अवसर पाउने धारणा राख्नुभयो ।
प्रवक्ता श्रेष्ठले भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रणसहितको सुशासनबिना देशको अर्थतन्त्रको विकास नहुने धारणा राख्नुभयो । देश विकासको बाधकका रूपमा रहेको असारे विकासको अवधारणा परिवर्तन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । नेता श्रेष्ठले बजेट छुट्याउने तर सम्पूर्ण बजेट खर्च गर्न नसक्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
अब कसैलाई दोष दिएर वा कसैलाई देखाएर पन्छिने अवस्था नरहेकाले काम गरेर देखाउनु एकमात्र विकल्प रहेको उहाँको भनाइ थियो । विश्वकै सुन्दर र अत्यन्त सम्भावना भएको राष्ट्र पाएर पनि यहाँका साधन स्रोतको उचित प्रयोग गर्न नसकिरहेको अवस्थामा सबै दल, वर्ग र क्षत्रेका नागरिक एक भएर लाग्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । स
मृद्ध नेपाल निर्माण गर्न ठूलो दल भएकाले नेकपाले नेतृत्व गरे पनि प्रतिपक्षी दल पनि उत्तिकै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो । उहाँले समाजवादोन्मुख समावेशी लोकतन्त्रलाई सफल बनाउन हिजोसँगै लडेका शक्तिबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
Prev१० वर्षका बालकले १३ वर्षकी बालिकालाई बनाए गर्भवती
Nextव्वाइफ्रेण्डलाई सुटकेसभित्र कोचेर जेलबाट भगाउन खोजेपछि…
भारतको सिमा रक्षा गर्दा गर्दै जम्मु-कास्मिरमा अ’स्ताए ३० बर्षिय प्रेम केसी
यस्तो छ तपाईको मंगलबारको भाग्य, चैत्र ३ गतेको राशिफल हेर्नुहोस्
BREAKING NEWS>: होली मेलामा झ’डप, दुई जनाको मृ’त्यु र अझै केही युवाको ह’ता’ह’त भएको आ’शंका…
प्रेम बिवाह गरि घर बसालेकी निरुले अस्पतालमै लीईन अन्तिम सा’स…
बलात्कृत अपांगलाई न्याय मुस्किल (931)
प्रदेश ट्राफिक कार्यालय भरतपुरमा (864)
कोहलपुर दु’र्घट’ना अपडेट : ५ को मृ’त्यु (707)
जनता टाइम्सका संपादक शान्तिराम कार्कीको निधन (634)
वास्तु शास्त्रः यी पाँच दोष, जसले घरमा निम्त्याउँछन् गरिबी र अशान्ती (611)
केही कुरा याद हुँदैन ? यी आठ तरिकाले बढाउनुहोस् दिमागको क्षमता (610)
एम्बुलेन्स सञ्चालन भद्रगोल : निर्देशिका गज्जबको, कार्यान्वयन भेट्टाउनै गाह्रो ! (599)
भर्खरै आयो दु:खद खबर : विद्यार्थी बोकेको बस दुर्घटना,हुँदा ५ विद्यार्थीको मृत्यु मनमा दया भए (RIP) लेख्नुहोला:, ’ (588)
नरिवल तेलको विवादः यसले फाइदा गर्छ कि साँच्चै विषालु हो ? (581)
नेकपामा किन असन्तुष्ट छ माधव नेपाल समूह ? (577)